Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း)
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
နှာခေါင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းဟာ ဓါတ်မတည့်လို့မဟုတ်ပဲ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းတွင်နှာချေခြင်း သို့ နှာရည်ယိုခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် နှားခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ကလေးနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာဖြစ်ကြပြီး အသက် ၂၀ နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ် ။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်းဟာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းထက်ပိုပြီး အဖြစ်များပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၂ မျိုးစလုံးဟာလက္ခဏာတွေ ၊ ကူးစက်ပုံတွေ၊ ကုသမှုပုံစံတွေတူကြပါတယ် ။ နှာခေါင်းယားယံခြင်းနှင့် ရုတ်တရက်နှာချေခြင်းတွေဟာဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့ နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းမှာပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ် ။
ဒီလိုအခြေအနေဟာအဖြစ်များကြပါတယ် ။ အန္တရာယ်ရှိသည်များကိုလျှော့ချ၍ရောဂါသက်သာအောင်စီမံနိုင်ပါတယ် ။ အသေးစိတ်သိရှိရဖို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အကယ်၍သင့်တွင်ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲနှာခေါင်းအတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်လာပြီး တစ်နှစ်လုံးဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။ ယာယီလက္ခဏာများရှိသလို အမြဖြစ်နေမယ့်လက္ခဏာများလည်းရှိပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့… နှာပိတ်ခြင်း ၊ နှာရည်ယိုခြင်း ၊ နှာချေခြင်း ၊လည်ချောင်းမှချွဲများထွက်ခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းတို့ပဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းတွင်နှာခေါင်းယားယံခြင်းနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့Hay fever လိုမျိုး လည်ချောင်းနဲ့မျက်လုံးပြဿနာတွေတော့ ဖြစ်ခဲပါတယ် ။ အထက်ဖော်ပြစာရင်းမှာမပါတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်သိချင်လျှင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဆိုးဝါးနေပြီဆိုလျှင် ၊ ဆေးကူသမှုခံယူသော်လည်းရောဂါမသက်သာဘူးဆိုလျှင်၊ ဆေးဝါးများကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားနေရလျှင်..ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါပြီ။ အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှာမပါဝင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်လည်းဆရာဝန်နှင့်ပြသရပါမယ်။ လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူညီကြပါဘူး ။ အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရရှိဖို့ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတာအကောင်းဆုံးပါ။
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကတော့ သင့်နှာခေါင်းရဲ့သွေးကြောလေးတွေကျယ်လာပြီး နာခေါင်းတွင်းနေရာလွတ်တွေမှာ သွေးနဲ့အရည်တွေပြည့်လာလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နှာခေါင်းတွင်းသွေးကြောလေးများ ကျယ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ပထဆုံးအကြောင်းအရာကတော့နှာခေါင်းရှိအာရုံကြောလေးများ တုံ့ပြန်မှုအရမ်းကောင်းလာလို့ပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါမှာ အဆုတ်ရဲ့တုံ့ပြန်ပုံနဲ့တူညီပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့ နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာများစွာရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာခဏပဲပြတတ်သလို နာတာရှည်ရောဂါအထိလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကတော့..
– ပတ်ဝန်ကျင်ရှိ ယားယံစေသောအရာများဖြစ်သည့် ဖုန်များ ၊ မီးခိုးပါသောနှင်းထုများ ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့များ သို့ ပြင်းရှသောအနံ့များ ဥပမာ – ရေမွှေး..အစရှိသည်တို့သည် နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
– ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည့် အပူချိန် သို့ စိုစွတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းတွေက နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးကိုရောင်ရမ်းစေပြီး နှာပိတ်ခြင်း သို့ နှာရည်ယိုခြင်းများ ဖြစ်စေပါတယ် ။
– ဓါတ်မတည့်ခြင်း ကြောင့်မဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းမှုများတွင် အများဆုံးဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
– အစားအစာနှင့် သွားရေစာများတွင်အထူးသဖြင့် စပ်သောအရာများစားတဲ့အခါမှာအဖြစ်များပါတယ် ။ အရက်သောက်သုံးခြင်းဟာလည်းသင့်နှာခေါင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းအမြှေးပါးကိုရောင်ရမ်းလာစေပြီး အရည်များပြည့် ပြည့်လာစေနိုင်ပါတယ်။
– အချို့ဆေးဝါးကုသမှုများဟာလည်း နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ထိုဆေးတွေဟာတော့ aspirin,ibuprofen နဲ့သွေးပေါင်ကျဆေးဖြစ်တဲ့ beta blocker တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
– ထိုကဲ့သို့ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ စိတ်ငြိမ်ဆေးသောက်သုံးနေသူတွေ၊ စိတ်ကျကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ ၊ လိင်အင်္ဂါထောင်မတ်စေရန် ဆေးများ သောက်သုံးနေသူတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နှာခေါင်းတွင်းဖြန်းဆေးအများအပြားအသုံးပြုခြင်းဟာလည်းဆေးကြောင့် နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ၊ ရာသီလာစဉ်နှင့် ကိုယ်ဝန်တားဆေးအသုံးပြုနေစဉ်အချိန်တွေမှာလည်းဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
– ယားယံေးသောအရာများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း ၊ဥပမာ – မီးခိုးပါသောနှင်းထုများ ၊ ဆေးလိပ်ငွေ့များ၊ဓါတ်ငွေ့များ… အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါတယ် ။
– အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်များ ။ အသက် ၂၀ မတိုင်မီမှာရောင်ရမ်းမှုဟာ ဓါတ်မတည့်မှုများကြောင့်ဖြစ်တတ်ပြီး အသက် ၂၀ ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ရောင်ရမ်းမှုဟာ အခြားအကြောင်းများကြောင့်အဖြစ်များပါတယ် ။
– နှာခေါင်းတွင်ဖြန်းသည့်ဆေးများကိုရေရှည်အသုံးပြုမိခြင်း ။ အရည်များစုနေခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် နှာခေါင်းဖျန်းဆေးများ ရေရှည်အသုံးပြုပြီး၍ ဆေးရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါ ပိုပြီးဆိုးဝါးတဲ့အရည်များစုပုံမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။
– အမျိုးသမီးများတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်နှင့်ရာသီလာနေစဉ်တွင် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှူများကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
– ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ ၊ ဖျော်ရည်များ သို့ ဓါတုပစ္စည်းများ နှင့် ဓါတ်ငွေ့များရှူမိခြင်းကြောင့်လည်း ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– သိုင်းရွိုက်အားနည်းခြင်းနှင့် နာတာရှည် မောပန်းမှုရောဂါများတွင်လည်း ရောင်ရမ်းခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။
– စိတ်ဖိအားကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ ပင်ပန်းမှုများကြောင့်ဖြစ်စေ ရောင်ရမ်းမှုများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာနဲ့ဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများအပေါ်မှာမူတည်၍ရှာဖွေစမ်းသပ်ကြပါတယ် ။ ဆရာဝန်ဟာပြင်ပစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမေးမြန်းပါလီမ့်မယ်။ မသေချာလျှင်တိကျသောစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ် ။ သင့်တွင်နာပိတ်ခြင်း ၊ နှာရည်ယိုခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ညဆရာဝန်ဟာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောက့်မဟုတ်တဲ့နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတာကို အတည်ပြုပါလိမ့်မယ် ။
Nonallergic Rhinitis (ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော နှာခေါင်းအမြှေးပါးရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသရာတွင်ရောဂါဟာသင့်ကိုဘယ်လောက်အနှောက်အယှက်ပေးနေသလဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အပျော့စားလက္ခဏာများအတွက်ကတော့ အိမိတွင်းကုသမှုတွေနဲ့ အန္တရာယ်ရှိသည်များမှရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ပင် လုံလောက်ပါတယ်။ ပိုဆိုးသောရောဂါလက္ခဏာများအတွက်ကတော့..
– အလွယ်တကူရနိုင်သော နှာခေါင်းဖျန်းဆေးများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ယားယံစေသည့်အရာများကိုသက်သာစေခြင်း ၊ ချွဲအမြှေးပါးကိုပါးလွှာသွားစေခြင်း ၊ သင့်နှာခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အမြှေးပါးများကိုချောမွေ့စေခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
– အကယ်၍ antihistamine ဆေးတွေဟာသင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသက်သာစေလျှင် corticosteroid ဆေးများဖြစ်သည့် fluticasone (Flonase) or triamcinolone (Nasacort)တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
– antihistamine သောက်ဆေးတွေဟာရောဂါလက္ခဏာများကိုမသက်သာစေလျှင် antihistamine ပါတဲ့နှာခေါင်းဖြန်းဆေးများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
– နှာရည်ယိုခြင်းမှသက်သာစေတဲ့ anticholinergic နှာခေါင်းဖျန်းဆေးများ ။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါတွင်အသုံးပြုသော ipratropium ( atrovent) ဟာ ယခုအခါမှာ နှာရည်ယိုခြင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သတိထားရမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်းနှင့် နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းတွင်ခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
– နှာခေါင်းတွင်းအရည်များကိုသက်သာလျော့နည်းစေတဲ့သောက်ဆေးများကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် ။ ထိုဆေးတွေဟာသွေးကြောများကိုကျဉ်းစေပြီး နှာခေါင်းတွင်းရှိအရည်များကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ သွေးပေါင်တက်ခြင်းနှင့် ကတုံကယင်ဖြစ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေထိုင်မှူပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုသမှုများ ။
ဘယ်လိုနေထိုင်မှုပူံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုသမှုတွေက နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသလဲ။
– လွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်ပြီး ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများအသုံးပြုခြင်း ၊
– immunotherapy ကုသနည်းကိုတော့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွင်အသုံးမပြုပါဘူး။
– အကယ်၍သင့်တွင်ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းရှိနေလျှင်တော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရပါမယ်။
အကယ်၍သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိနေသေးလျှင်တော့ အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရရှိဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 18, 2019
Nonallergic Rhinitis. http://www.webmd.com/allergies/nonallergic-rhinitis#2. December 15, 2016
Nonallergic rhinitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/nonallergic-rhinitis/diagnosis-treatment/treatment/txc-20179179. December 15, 2016